Izindaba - 2021CMEF: I-Kangyuan Ithuthukisa Ikhwalithi Yempilo ngeSayensi Nobuchwepheshe
NgoMeyi 13, 2021, i-84th China International Medical Equipment Fair (CMEF) enesihloko esithi "new tech, smart future" yabanjelwa eShanghai National Convention and Exhibition Center. Ngabantu abaningi abebehambele lo mbukiso, ubukhazikhazi balo mcimbi budlula noma yisiphi isenzakalo esake senzeka phambilini.
Kulo mbukiso, i-Haiyan Kangyuan Medical Instrument Co, Ltd. iletha imikhiqizo eminingi emisha, efana ne-silicone foley catheter enebhaluni elihlanganisiwe, i-silicone foley catheter enezinga lokushisa, i-silicone gastrostomy tube kanye ne-silicone tracheotomy tube, edonse amehlo abantu abaningi .
Yaqalwa ngo-2005, Kangyuan ihlanganisa indawo ecishe ibe ngu-20,000m annual ngenani lonyaka lokukhipha elingaphezulu kwezigidi eziyi-100 zama-yuan. Inemigqa ephelele yokukhiqiza ezenzakalelayo, ama-4000m² ekilasi elihlanzekile leklasi eli-100,000 kanye nama-300m² ekilabhoratri yekilasi engu-100,000 ahlanganiswe nokuhlolwa okwenziwe ngezandla ukuqinisekisa ukuphepha nekhwalithi yemikhiqizo. Ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi yentuthuko engaguquguquki, uKangyuan usengumkhiqizi omkhulu wezinto ezisetshenziswayo zokwelashwa eMpumalanga China.
Ngomqondo ophakeme wesibopho senhlalo
UKangyuan uzibophezela ekwenzeni ngcono ikhwalithi yokunakekelwa nempilo yeziguli
Ukuhlinzeka umphakathi ngezinto ezisezingeni eliphakeme ezilahlwayo
I-2021CMEF izophela ezinsukwini ezimbili
Inombolo yethu yedokodo ngu-8.1ZA39